စိတ်နာလို့ ဘယ်တော့ မှ သီချင်းဆို ပြိုင်ပွဲတွေ မပြိုင် တော့ဘူးလို့ ပြော လိုက်တဲ့ ဖြိုးကျော်ထိုက် – Cele Posts
ဖြိုးကျော်ထိုက် ကတော့ Melody World သီချင်းဆို ပြိုင်ပွဲကနေ တဆင့် ဂီတလောကထဲကို စတင်ဝင်ရောက် ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ အနေနဲ့ တစ်ကိုယ် တော် အခွေတွေလည်း ထွက်ရှိခဲ့သူဖြစ် သလို Single Song တွေလည်း အများကြီး ထွက်ရှိ ခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင် သီဆို ထားတဲ့” သစ္စာမရှိတဲ့ သစ္စာ” ဆိုတဲ့ သီချင်းက ဖြိုးကျော်ထိုက် အတွက်တော့ ပရိသတ်အခိုင်အမာ ရရှိခဲ့တဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိ နှုတ်ထွက် လိုက်ရတဲ့ The Voice Myanmar သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲက သူ့အတွက် နောက်ဆုံး ပြိုင်ပွဲဖြစ်တယ် လို့လည်း သိရပါတယ်။ယခုရက်ပိုင်း မီဒီယာတွေ့ဆုံမှုတစ်ခု မှာတော့ ဖြိုးကျော်ထိုက်က သူ့အနေနဲ့ စိတ်နာလို့ သီချင်းဆို ပြိုင်ပွဲတွေ ဘယ်တော့မှ မပြိုင်တော့ဘူးလို့ ပြောလာခဲ့တာပါ
ကျွန်တော်က အစကတည်းက Battle Round မှာကတည်းက ကျွန်တော် မပြိုင်တော့ဘူး လုပ်တာ….ဒါပေမယ့် သူတို့နဲ့ စာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုး ထားရတာဆိုတော့ ဆက်ပြိုင်ဖြစ် သွားတာပေါ့…. သူတို့နဲ့စာချုပ်မှာက အဆုံးထိပြိုင်ရမယ် ဆိုတာက ပါတယ်ဆိုတော့လေ နောက်ထပ် သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲဆို တာတော့ ကျွန်တော့အတွက်ရှိလာတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး… ကျွန်တော့ ဘဝမှာ သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲ ၄ ခုအထိပြိုင်ဖူးတယ် ….အခု The Voice ကနောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲပါပဲ… နောက်ဘယ်လောက်ပဲ ဆုကြေးများများ ကျွန်တော်တသက်လုံး ပြိုင်ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး….အဲ့ဒီရဲ့ Feedback ကိုကျွန်တော်မခံနိုင်ဘူး…
ကျွန်တော်က လူပျိုဆိုလည်း တမျိုးကောင်းတာပေါ့ …. အခုက မိန်းမနဲ့ကလေးနဲ့ဆိုတော့ ထိန်းချုပ်ရ တာတွေရှိတယ် လူလွတ်ဆိုရင်တော့ ဘာပြောကောင်းမလဲ…မိန်းမနဲ့ကလေးနဲ့ဆိုတော့ သည်းခံရတာတွေရှိတယ် အဲ့ဒီတော့ အဆင်မပြေပါဘူး…ဒါနောက်ဆုံးပါပဲ။
သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကို စိတ်လည်း ကုန်တယ် နောက်ပြီး ကံမပေးတာလည်းပါတယ်…. Comment တွေမှာကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ် စန်းမရှိဘူးတို့ တရာဖိုးသုံးပုဒ် ဆိုတယ် ဆိုတဲ့ မန့်တွေလည်း သိရပါတယ် သီချင်းဆိုတာ တရာဖိုး သုံးပုဒ်လို့ အတန်းအစား သတ်မှတ်လို့မရပါဘူး ကျွန်တော်တို့ဆိုတဲ့ သီချင်းတွေက တရာဖိုးသုံးပုဒ် သတ်မှတ်လို့မရပါဘူး.. ကိုစိုးသူသီချင်းကို ကျွန်တော်ဆိုသလို ပြန်ပြောင်းပြီးဆိုကြည့်ပါ သိပါလိမ့်မယ် …. ဒီသီချင်းက လူငယ်တွေမသိနိုင်တော့တဲ့သီချင်းမို့လို့ ကျွန်တော်က ပြန်ဖော်ထုတ်ဆိုတာပါ…တရာဖိုးသုံးပုဒ်လို့ ဝေဖန်တာမျိုးတော့ မလုပ်သင့်ပါဘူး…
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက လူတွေက ကိုဆောင်းဦးလှိုင်ပြော သလိုပဲ ဆဲရင်း ဆဲရင်း ဆင်းရဲသွားကြတဲ့သူတွေလို့ ပြောရမလိုဖြစ်နေတယ် မြန်မာနိုင်ငံမှာနေကြတဲ့သူတွေအချင်းချင်း ဘာမှ ထိခိုက်နစ်နာအောင်လုပ်ထားတာမျိုးလည်းမရှိပဲနဲ့ ဘလိုင်းကြီးဆဲရေးနေတာက အဆင်မပြေဘူး လို့ကျွန်တော်မြင်မိပါတယ်
နောက်ပြီး နေ့တိုင်းကျွန်တော့်မှာ အဆဲခံ နေရတာ ကြာလာတော့လည်း ပေါက်တယ် … ကောင်းလည်းအဆဲခံရတယ် … အလှူလုပ် … ပရဟိတလုပ်တော့လည်း ဒီကောင်ဗန်းပြ တာပါဆိုပြီး အမျိုးမျိုးမြင်နေကြတော့ ကျွန်တော်က ဘာဆက် လုပ်ရမလဲ လို့ တွေးမိတယ် နောက်ဆုံးဆဲတဲ့သူတွေကြတော့လည်း Fake Account တွေနဲ့ဆိုတော့ ပြောရခက်တယ် ” လို့ ဖြိုးကျော်ထိုက်က သူကြုံခဲ့ရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ပြောပြလာခဲ့တာ ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အဆုံးထိဖတ်ရှုပေးကြလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။
စိတျနာလို့ ဘယျတော့ မှ သီခငျြးဆို ပွိုငျပှဲတှေ မပွိုငျ တော့ဘူးလို့ ပွော လိုကျတဲ့ ဖွိုးကြျောထိုကျ
ဖွိုးကြျောထိုကျ ကတော့ Melody World သီခငျြးဆို ပွိုငျပှဲကနေ တဆငျ့ ဂီတလောကထဲကို စတငျဝငျရောကျ ခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ သူ့ အနနေဲ့ တဈကိုယျ တျော အခှတှေလေညျး ထှကျရှိခဲ့သူဖွဈ သလို Single Song တှလေညျး အမြားကွီး ထှကျရှိ ခဲ့တာ တှရေ့ပါတယျ။ သူကိုယျတိုငျ သီဆို ထားတဲ့” သစ်စာမရှိတဲ့ သစ်စာ” ဆိုတဲ့ သီခငျြးက ဖွိုးကြျောထိုကျ အတှကျတော့ ပရိသတျအခိုငျအမာ ရရှိခဲ့တဲ့ သီခငျြးတဈပုဒျဖွဈပါတယျ။
လကျရှိ နှုတျထှကျ လိုကျရတဲ့ The Voice Myanmar သီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲက သူ့အတှကျ နောကျဆုံး ပွိုငျပှဲဖွဈတယျ လို့လညျး သိရပါတယျ။ယခုရကျပိုငျး မီဒီယာတှဆေုံ့မှုတဈခု မှာတော့ ဖွိုးကြျောထိုကျက သူ့အနနေဲ့ စိတျနာလို့ သီခငျြးဆို ပွိုငျပှဲတှေ ဘယျတော့မှ မပွိုငျတော့ဘူးလို့ ပွောလာခဲ့တာပါ
ကြှနျတျောက အစကတညျးက Battle Round မှာကတညျးက ကြှနျတျော မပွိုငျတော့ဘူး လုပျတာ….ဒါပမေယျ့ သူတို့နဲ့ စာခြုပျမှာလကျမှတျထိုး ထားရတာဆိုတော့ ဆကျပွိုငျဖွဈ သှားတာပေါ့…. သူတို့နဲ့စာခြုပျမှာက အဆုံးထိပွိုငျရမယျ ဆိုတာက ပါတယျဆိုတော့လေ နောကျထပျ သီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲဆို တာတော့ ကြှနျတော့အတှကျရှိလာတော့မှာ မဟုတျပါဘူး… ကြှနျတော့ ဘဝမှာ သီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲ ၄ ခုအထိပွိုငျဖူးတယျ ….အခု The Voice ကနောကျဆုံးပွိုငျပှဲပါပဲ… နောကျဘယျလောကျပဲ ဆုကွေးမြားမြား ကြှနျတျောတသကျလုံး ပွိုငျဖွဈတော့မှာမဟုတျပါဘူး….အဲ့ဒီရဲ့ Feedback ကိုကြှနျတျောမခံနိုငျဘူး…
ကြှနျတျောက လူပြိုဆိုလညျး တမြိုးကောငျးတာပေါ့ …. အခုက မိနျးမနဲ့ကလေးနဲ့ဆိုတော့ ထိနျးခြုပျရ တာတှရှေိတယျ လူလှတျဆိုရငျတော့ ဘာပွောကောငျးမလဲ…မိနျးမနဲ့ကလေးနဲ့ဆိုတော့ သညျးခံရတာတှရှေိတယျ အဲ့ဒီတော့ အဆငျမပွပေါဘူး…ဒါနောကျဆုံးပါပဲ။
သီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲကို စိတျလညျး ကုနျတယျ နောကျပွီး ကံမပေးတာလညျးပါတယျ…. Comment တှမှောကွညျ့ရငျ သိနိုငျပါတယျ စနျးမရှိဘူးတို့ တရာဖိုးသုံးပုဒျ ဆိုတယျ ဆိုတဲ့ မနျ့တှလေညျး သိရပါတယျ သီခငျြးဆိုတာ တရာဖိုး သုံးပုဒျလို့ အတနျးအစား သတျမှတျလို့မရပါဘူး ကြှနျတျောတို့ဆိုတဲ့ သီခငျြးတှကေ တရာဖိုးသုံးပုဒျ သတျမှတျလို့မရပါဘူး.. ကိုစိုးသူသီခငျြးကို ကြှနျတျောဆိုသလို ပွနျပွောငျးပွီးဆိုကွညျ့ပါ သိပါလိမျ့မယျ …. ဒီသီခငျြးက လူငယျတှမေသိနိုငျတော့တဲ့သီခငျြးမို့လို့ ကြှနျတျောက ပွနျဖျောထုတျဆိုတာပါ…တရာဖိုးသုံးပုဒျလို့ ဝဖေနျတာမြိုးတော့ မလုပျသငျ့ပါဘူး…
ကြှနျတျောတို့နိုငျငံက လူတှကေ ကိုဆောငျးဦးလှိုငျပွော သလိုပဲ ဆဲရငျး ဆဲရငျး ဆငျးရဲသှားကွတဲ့သူတှလေို့ ပွောရမလိုဖွဈနတေယျ မွနျမာနိုငျငံမှာနကွေတဲ့သူတှအေခငျြးခငျြး ဘာမှ ထိခိုကျနဈနာအောငျလုပျထားတာမြိုးလညျးမရှိပဲနဲ့ ဘလိုငျးကွီးဆဲရေးနတောက အဆငျမပွဘေူး လို့ကြှနျတျောမွငျမိပါတယျ
နောကျပွီး နတေို့ငျးကြှနျတေျာ့မှာ အဆဲခံ နရေတာ ကွာလာတော့လညျး ပေါကျတယျ … ကောငျးလညျးအဆဲခံရတယျ … အလှူလုပျ … ပရဟိတလုပျတော့လညျး ဒီကောငျဗနျးပွ တာပါဆိုပွီး အမြိုးမြိုးမွငျနကွေတော့ ကြှနျတျောက ဘာဆကျ လုပျရမလဲ လို့ တှေးမိတယျ နောကျဆုံးဆဲတဲ့သူတှကွေတော့လညျး Fake Account တှနေဲ့ဆိုတော့ ပွောရခကျတယျ ” လို့ ဖွိုးကြျောထိုကျက သူကွုံခဲ့ရတဲ့ အခကျအခဲတှကေို ပွောပွလာခဲ့တာ ပဲဖွဈပါတယျနျော။အဆုံးထိဖတျရှုပေးကွလို့ ကြေးဇူးတငျပါတယျနျော။
လုံးဝ မထင်မှတ်ထားတဲ့ လက်ဆောင် တစ်ခုကို ရလိုက်လို့ ၀မ်းသာပီတိ ဖြစ်နေတဲ့ ညီနန္ဒ